त्रिकाेणात्मक सिरिजका लागि क्रिकेट टीम घाेषणा, काे काे परे त ? - Everest Dainik - News from Nepal
त्रिकाेणात्मक सिरिजका लागि क्रिकेट टीम घाेषणा, काे काे परे त ?
२०७८, ५ भाद्र शनिबार
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि १७ सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ । विश्वकप क्रिकेट लिग टु अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमानबीच ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनी (पिएनजी)सँग हुने एक दिवसीय सिरिजका लागि टिम छनाैट भएकाे हाे । ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सिरिज भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा तीब्र गतिका बलर गुल्सन झा पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन् । साथै अर्का तीव्र गतिका बलर विक्रम शोब, शरद भेषवाकर र रोहितकुमार पौडेल पुनः राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन् । त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिका सँग २÷२ खेल खेल्ने छ भने उक्त सिरिज अगाडि पिएनजीसँग दुई एक दिवसीय खेल खेल्नेछ ।